7 Cashar Oo Laga Bartay Dhiirigelinta Qoraalkaaga | Martech Zone
7 Cashar Oo Laga Bartay Dhiirigelinta Qoraalkaaga
Axad, Sebtembar 25, 2011 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku faraxsanahay inaan buug ka dhigno Jo-Anne Vandermeulen Suuqgeynta Tech Tech radio show laakiin qiyaastii 20 daqiiqo gudahood, marinkeena internetka ayaa hoos u dhacay waana inaan joojineynaa bandhiga. Waxay ahayd niyad jab tan iyo markii aan runtii ka helnay talo weyn Jo-Anne.
Jo-Anne waa khabiir dhiirrigelin iskiis u daabaca. Ka dib markay ka fariisato macallinimo, waxay qortay buugaag taxane ah in hawshaasna waxay ku baratay sida loo barto kor u qaadista daabacaaddeeda. Waxay hadda u heellan tahay ganacsigeeda, iyada blog, mid walba podcast, iyo buugeedii ugu cusbaa ee ka caawiya qorayaasha kobcinta qoraalkooda.
Waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmay Jo-Anne dhowr sano ka hor… si fiican intaanan qorin Blogging Corporate for Dummies. Maaha in buuggu uusan si joogto ah u iibinaynin si wanaagsan - waa uun inaanan rumaysanayn inaan sameeyay wax walba oo aan kari karay markii aan kor ugu qaadayay buugga. Iyada oo ay weheliso soo-galinta Jo-Anne, waxaan isku soo wada daray liiskan casharrada.
Haddii aad adigu tahay daabacaad, aad dhex marto shirkad daabacan oo yar, ama daabacaad dhaqameed… waxaad masuul ka noqon doontaa inaad suuq geyso naftaada iyo buugaagtaada. Adigu waad awoodi kartaa inaad tan sameyso, xitaa haddii aadan haysan shahaadada suuq-geynta ama aad rabto inaad raadsato xirfadle suuq ah, LAAKIIN, waxay qaadan doontaa waqti iyo tamar - iyo aqoon.
Bilaabida baloog waa lagama maarmaan. Si sax ah u soo bandhig naftaada sida khabiir, u soo bandhig waxyaabo qiimo leh oo ay daawadayaashaadu qaadan karaan, oo siin karaan waxna siin karaan. Noqo mid sax ah, oo soo dhaweynaya is dhexgalka aad la leedahay dhagaystayaashaada. Iyo dabcan - ha iloobin inaad wicitaan ficil ah u dhigto dhinaceeda buuggaaga (yadaada) badhanka iibsiga oo cad iyo xiriiriyeyaal shaqeynaya!
Lahaanshaha joogitaanka warbaahinta bulshada waa qasabad qiimo leh oo lagu kasbado BADAN (waxaan ka hadlaynaa 1.2 billion oo xubnood oo Facebook ah kaligood sanadka 2012. Taasi waa wax badan oo intaas ka badan markaa waxaad waligaa ku riyoon doontaa inaad isku xirto inta lagu jiro saxiixa buugga). Bartilmaameedsada dhagaystayaashaada, diyaar u ahaaw in aad naftaada (iyo buugaagtaada) ka dhigto mid ka muuqan kara shabakadaha badan ee suurtogalka ah, waqtina ku bixi abuurista xiriirro aakhirka albaabka u furaya fursado badan.
Dhiirrigelinta buuggaagu wuxuu bilaabmayaa maalinta aad fikrad ka haysato buugga! Dhisida himilada ee dhagaystayaashaada waa muhiim. Dad aad u tiro badan (annaga oo aan ku jirno) waxay sugaan inta buuggu daabacayo ka hor intaysan kor u qaadin. Waqti badan iyo dadaal ayaan ku luminay kan! Waxaan jeclaan lahaa inaan riixno amarro horudhac ah oo aan deg deg u helno degel.
Afhayeen ahaan, qaar ka mid ah asxaabtayda ila hadla waxay kor u qaadeen iibinta buugaagta waxayna u qaybiyeen buugaag kale oo badan codsashada buugaagta iibsiga dhacdada ee kaqeybgalayaasha halkii aad ka bixin lahayd khidmadda hadalka. Tani waa fikrad aad u fiican maxaa yeelay waxay ka shaqeysaa 3 heer… oo kugula jaan qaadaya buugga, iibinta buugaag badan, iyo yeelashada dhagaystayaal akhristayaal ah oo u baxaya kana hadlaya buugga. Waa guul, guul, guul!
Faallooyinka ayaa muhiim ah! U dir nuqulada buugga masuuliyiinta kale ee ka shaqeeya warshadahaaga iyo codso jawaab celin daacad ah iyo dib u eegis ku saabsan Amazon iyo goobaha kale ee dib u eegista buugaagta. Maamuladaas baloogyada leh ayaa inta badan qori doona qoraallo ku saabsan buuggaaga waxayna kaa caawin doonaan inaad kor u qaaddo.
Dhiirrigeli akhristayaashaada! Buuggeenna, waan haysannay fiidiyowyada oo dhan ayaa ka socda Koonfur Afrika ilaa sawir laga soo qaaday madaxa Blogger-ka eBay, Richard Brewer-Hay, usbuucii hore! Akhristayaashaadu waxay rabaan inay xiriir shakhsi ahaaneed kula yeeshaan qoraaga - markaa hubi inaad ka faa'iideysato oo aad dhisto xiriirkaas markii ay fursadaha soo baxaan!
Hubso inaad soo qaadatid nuqul ka mid ah buugga cusub ee Jo-Anne, Talooyinka Xayeysiinta Lacagta ee Qorayaasha.
Isu-hagaajinta Goobista Maxakamaddu kama hor-tagayso Soo-Jeedinta Qaranka ama Caalamiga ah
Kulligeen Waxaannu nahay Qariib
Sep 25, 2011 at 10: 28 PM
Lambarka shanaad macno badan buu ii sameeyaa - mahadsanid. Weligay iskama fikiri jirin kaligay.